खेमराज गुरु, गिरिजाबाबु र गेस्ट हाउस कास्की कांग्रेसका बाँकी १५ दाबेदारमध्ये कसैले पनि मैले नपाएर गुरुले किन उम्मेदवारी पाउनुभयो भनेर रत्तिभर गुनासो नगर्नु, गुरुका लगि ठूलो सम्मान हो।
तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन र डायलसन अधिकारी एउटा दीर्घकालिन महत्वको विषयको अभियानमा जाँदा ज्यान गुमाएका डायलसन दाईलाई यो सम्मेलनले पनि सम्झिरहने छ भन्ने अपेक्षा छ।
साझा संकल्पको दस्तावेज नेपालकाे संविधान संविधानको घोषणासँगै देश दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व र न्यायपूर्ण सामाजिक, आर्थिक विकासको बाटोमा तीव्रताका साथ अघि बढ्ने हाम्रो विश्वास छ।
रोष्टम घेर्नु पर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य सरकारले प्रहरी प्रशासनले स्वयं अपराधीलाई कारवाही गर्नु पर्नेमा घटनाबारे प्रतिपक्षले रोष्टम घेर्नु पर्ने अवस्था आउनु अर्को दुर्भाग्य हो।
‘एनआरएन धनाढ्यहरूको क्लब हुनुहुँदैन’ एनआरएनको परिकल्पना गर्नु नेपाल र गैरआवासीय नेपालीका लागि साह्रै महत्वपूर्ण कुरो हो। यो एउटा पवित्र मन्दिर जहाँ राजनीति रूपी जुत्ता बाहिर नै फुकालेर जानु पथ्र्यो।
जम्मु-काश्मीरबाट लद्दाख अलग (धारा ३७० मा यस्तो छ) भारत सरकारले जम्मु-काश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गरेको छ । संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ५ खारेज गरिएसँगै जम्मु काश्मीरको विशेष अधिकार खोसिएको हो ।
‘मलाई मार्न खोज्ने पुलिसको बन्दुक नै बिग्रेको रहेछ’ जेल सार्दा पुलिसहरूले जंगलको बाटोमा आपसमा ‘यति सानो छ, विचरा कसरी मार्ने होला’ भनेर कुरा गरेको मैले सुनेको थिएँ।
कीर्तिबाबुका केही सम्झना संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले सुनाएका स्वर्गीय प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टसँग सम्बन्धित केही रमाइला संस्मरण पोस्ट गरिएका रहेछन् मेरो एक साथीको फेसब'क वालमा । जोशीले सुनाएका ती स-साना प्रसङ्गहरू पढेपछि मैले पनि ...
ओलीको रेल होइन, गाउँ–गाउँमा कालोपत्रे ओली सरकार चीनबाट रेल ल्याउन लागेको छ। त्यो पैसाले गाउँगाउँमा १२ महिना चल्ने कालोपत्रे बाटो बनाउन सकिन्छ । अनि नेपालका विकासका सम्भावना कसरी अघि बढ्छ त्यसले देखाउँछ ।
‘असफल’ खेलकुद मन्त्री र राखेपमा सदस्य सचिवको नियुक्ति ! युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मालाई मन्त्री भएकै दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवको पद असार ९ गते सकिँदै छ भन्ने जानकारी थियो ।
नेपालमा एनआरएनएकाे लगानी ‘सम्पत्ति सुरक्षित हुँदैन कि भन्ने डर छ’ डर यत्ति मात्र छ कि भोलि त्यो सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन? लगानी फिर्ता गर्न पाइन्छ कि पाइदैंन?
डायस्पोरालाई नेपालसँग गाँस्ने विश्वप्रकाशका सूत्र संस्कृति र समृद्धिको यो दुई कुराको सन्दर्भमा यदि हामीले ख्याल गरेनौं भने पछिल्लो पुस्ताले राम्रै घर पाउला, आकर्षक जागिर पाउला, बैंक ब्यालेन्स पाउला, सुखी जिन्दगी पाउला । तर, नेपालीत्व ...
विचार कम्युनिष्ट सरकार अर्थात् याेजनाबद्ध शोषणको युग नक्कली भ्याट बिल, एनसेल कर, नेवानि वाइडबडी हवाइजहाज खरिद, टेलिकम फोर जी लाइसेन्स्, बालुवाटार जग्गा अपचलन, मेलम्ची खानेपानी, विदेशबाट आएको वैध स्रोत बिनाको अर्बौं रुपियाँ आदि भ्रष्टाचार र अनियमितताका ...
‘बदनियतमा सहुलियत हुँदैन’ आन्तरिक जुन शुद्धीकरण छ यो सफल बनेको छ । हिजो प्रहरीलाई केही दिनुपर्छ अनि उनीहरूले खान्छ भन्ने थियो नि यो पूर्ण निस्तेज बनेको अवस्था छ ।
सुरक्षा र म बाबा हजुरले सिट बेल्ट बाँध्नुभयो ? अचानक को प्रश्नले म छक्क परे । हामी बाबुछोरा रातिको पार्टी सकेर घर फर्कने क्रममा थियौं । बाँधेको छु बाबु किन र मैले ...